ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန်နစ်ဆန်း အေဒီဗန်များ | နစ်ဆန်းအေဒီဗန် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
White Nissan AD VAN 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
White Nissan AD VAN 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
Pearl White Nissan AD Van 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
White Nissan AD VAN 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Pearl White Nissan AD Van 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Nissan AD Van 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Nissan AD Van 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
ပြည်တွင်း ကားဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ဂျပန်ကားတွေထဲမှာ နစ်ဆန်းကား အမျိုးအစား Brand ဟာလည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇိမ်ခံ ဆလွန်း၊ ဗန်ကား၊ မီနီ ဘတ်စ်ကားတွေထဲမှာ တိုယိုတာ တံဆိပ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြေးနေတဲ့ အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပြီး Nissan AD Van ( မြန်မာ အခေါ် နွားကြီး) ဗန်ကား အမျိုးအစားမှာ မြန်မာ တက္ကစီ သမားတွေထဲမှာ အကြမ်းခံတဲ့ နာမည်ကြီးမူတွေနဲ့ အကြိုက်များလာခဲ့တဲ့ ကားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ စတေရှင်း ၀ဘ်ဂွန်ထဲမှာလည်း ပါတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သူက တိုယိုတာ (ကြက်တူေ၇ွး)Caldina ၊ corolla ဗန်တို့ကဲ့သို့ ပုံစံများသို့ပဲ ပုံသဏ္ဍာန် ဆင်ပြီး ဌင်းတို့ထက် ပိုတာက မီးလုံး ရှေ့ ဘန်ဘားတို့မှာ ကြီးမား ထုထည်ကြီးမား သကဲ့သို့ ထင်ရပြီး ကြံခိုင်တဲ့ ပုံစံတို့ဖြင့် လူထုရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး AD Van တွေကို ၀ယ်မယ်ဆိုလျှင် တိုယိုတာ (ကြက်တူေ၇ွး)Caldina ၊ ကိုရိုလာ ဗန်တို့လို့ မော်ဒယ် အနိမ့်တွေ စီးရမှာ မဟုတ်ဘဲ မော်ဒယ် ၂၀၀၈ နဲ့ အထက် အမြင့်စား တွေကို စီးနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ တိုယိုတာ (ကြက်တူေ၇ွး)Caldina ၊ corolla ဗန်တို့မှာ မော်ဒယ် အနိမ့်တွေသာ ရရှိမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဌင်းတို့ထဲက မော်ဒယ် အမြင့်တွေဆိုလျှင် ပုံပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မူအရ အထဲမှာလည်း ကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်းနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ ရှိလှပါတယ်။ ထို့အပြင် ဌင်းတို့မှာ ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာ ရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပြီး အခြား နစ်ဆန်းထဲက နာမည်ကြီး တံဆိပ်တွေကတော့ Nissan latio, Nissan Tiida Latio, Nissan Wingroad တို့ဖြစ်ပြီး Nissan Navara တို့ကိုလည်း တွေ့နိင်ပါတယ်။
အေဒီ ဗန် မော်ဒယ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်
စလစ် လွတ်သွင်းနိင်တဲ့ မော်ဒယ်များ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၉၊ ၂၀၀၈ စတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို အသွင်းများပါတယ်။ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၂၀၀စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၆၀၀ စီစီနဲ့ ၁၈၀၀ စီစီ တို့လာပြီး ပြည်တွင်းမှာတော့ ၁၃၅၀ စီစီအောက်ဖြစ်တဲ့ အင်ဂျင်တွေကို သွင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အော်တို ဓာတ်ဆီ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း တီတာနဲ့ ဆက်နွယ်လျက်ရှိတဲ့ နစ်ဆန်း အေဒီဗန်များ ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အေဒီဗန်ကားတွေဟာ ဗန်ကားရဲ့ ကြံခိုင်မှုကို အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး နေရာထိုင်ခင်းမှာ ကျယ်ပြန့်ပြီး လုံလောက်မှု ရှိပါတယ်။ အနောက်ဖက် ပစ္စည်းတင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်း လုံလုံလောက်လောက်ရ၇ှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေဒီဗန်ကိုတော့အဖြူရောင် ကိုယ်ထည်ဖြစ်သာ ရရှိပါတယ်။ ကားဒတ်ရ်ှဘုတ်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ လေးထောင့်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်ထားပြီး တံခါးကိုယ်ထည်တွေက အစ ကြီးမားကြံခိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဖက်မှာ ကားမီးလုံးတွေ အပြင် အနောက်ဖက်ကားနောက်တံခါးရဲ့ ထိပ်တည့်တည့်မှာ ဘ၇ိတ်မီးတန်း ရှည်တစ်ခုကိုပါထည့်သွင်းထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကွက် နဲ့ ရရှိနိုင်မှု
အေဒီ ဗန်ကတော့ တစ်ခြားကား အမျိုးအစားတွေလို မော်ဒယ် ကွဲတွေ သိပ်မရှိတဲ့ အတွက် ကားဈေးခေါ်ယူမူမှာလည်း ရှင်းပါတယ်။ အနာအဆာနဲ့ လေလံ ဂရိတ်၊ မော်ဒယ် နှစ်များ လောက်ကိုသူ ကြည့်ပြီး ဈေးနှုန်း အနည်းငယ် ကွာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကတော့ ကျပ် သိန်း ၈၀ လောက်ကနေ စပြီး ရနိင်ကာ ကျပ်သိန်း ၁၂၀ လောက်ထိ ပေါက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ဈေးနှုန်းများဟာ ကားရဲ့ ကောင်းမွန်မူကို မူတည်နေသလို လေလံမှ မှာယူရရှိခဲ့တဲ့ ဈေးအပေါ်တွင်လည်း မူတည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းလမ်းတွေနဲ့တော့ အကြမ်းပတမ်းခံ မောင်းနင်နိင်တဲ့ အေဒီဗန်ကားများ ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်း သယ်ယူမူမှာလည်း နေရာ နောက်ခန်းက ကျယ်ဝန်းစွာ ပါရှိတဲ့ အတွက် အဆင်ပြေလှတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကားအတွင်းခန်းကလည်း ရှင်းလင်းပြီး ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ အတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။